चुम्बक - Print Peppermint
आफ्नो सन्देश फ्रिज, कार, वा तपाईंले फेला पार्न सक्ने कुनै पनि धातुमा टाँस्नुहोस्।
घर / बजार सामग्री / चुम्बक
म्याग् कट म्याग्नेटहरू
मिति म्याग्नेट बचत गर्नुहोस्
कुनै पनि आकार वा आकारमा अनुकूलन म्याग्नेट बनाउनुहोस् तपाईंको व्यवसाय, स्कूल वा घटना मार्केट गर्न। लोकप्रिय प्रयोगहरू समावेश गर्दछ - कार म्याग्नेट, फ्रिज म्याग्नेट र अधिक।
चुम्बकीय-ब्याक गरिएको स्टक
मानक आकार वा कस्टम डाइ-कटिंग
मौसम प्रतिरोधी र टिकाउ
FAQs - म्याग्नेटहरू
के तपाईं चुम्बकीय स्ट्रिपको साथ छुट कार्ड प्रस्ताव गर्नुहुन्छ?
हो, हामी, मूल्य निर्धारण र विकल्पहरू प्राप्त गर्न कृपया कस्टम उद्धरण फारम भर्नुहोस्।
के एल्युमिनियम चुम्बकीय हो?
एल्युमिनियम सामान्य परिस्थितिमा गैर-चुम्बकीय मानिन्छ। यो एक paramagnetic सामग्री हो, जसको मतलब यो चुम्बक को एक कमजोर आकर्षण छ। तपाईं दैनिक अनुभवहरूमा यसको चुम्बकीय गुणहरू अवलोकन गर्न सक्नुहुन्न। उदाहरणका लागि, तपाईंले फ्रिज चुम्बकमा एल्युमिनियम पाना टाँसिएको देख्नुहुने छैन। यद्यपि, बलियो चुम्बकीय क्षेत्रहरूमा पर्दा, एल्युमिनियमले चुम्बकत्व प्रदर्शन गर्न सक्छ। एउटा… थप पढ्नुहोस्
के स्टेनलेस स्टील चुम्बकीय हो?
स्टेनलेस स्टील को चुम्बकीय व्यवहार को बारे मा एक व्यापक मिथक छ। धेरैले विश्वास गर्छन् कि सबै प्रकारका स्टेनलेस स्टीलले चुम्बकलाई आकर्षित गर्न सक्छ। त्यो पटक्कै सत्य होइन। वास्तवमा, चुम्बकहरूले केही प्रकारका स्टेनलेस स्टीलहरूमा काम गर्छन्। त्यहाँ धेरै प्रकारका स्टेनलेस स्टीलहरू छन्, तर हामी तिनीहरूलाई वर्गीकृत गर्न सक्छौं ... थप पढ्नुहोस्
म्याग्नेट के बनेको छ?
चुम्बकहरू जताततै छन्। हाम्रो कार इन्जिन देखि हाम्रो व्यापार कार्ड सम्म, हामी आजकल लगभग सबै मा चुम्बक प्रयोग गर्छौं। यद्यपि, हामी मध्ये धेरैले वास्तवमा तिनीहरू के बनेका छन् भनेर बुझ्दैनौं। अधिकांश चुम्बकीय धातुहरू मानव निर्मित हुन्। फलाम, निकेल, कोबाल्ट, र दुर्लभ पृथ्वी तत्व को केहि मिश्र धातु जस्तै लौहचुम्बकीय सामग्री को उजागर जब चुम्बकीय गर्न सकिन्छ ... थप पढ्नुहोस्
तपाईको गोलाकार कुनामा म्याग्नेटमा कुनाको अर्धव्यास के हो?
हाम्रो सबै गोलाकार कुना ब्यापार कार्ड म्याग्नेट वास्तवमै मर्ने काटिन्छ र १/1 वा १/8 इन्च त्रिज्याको कुनाको छनोट प्रदान गर्दछ।
तपाईं चुम्बकीय व्यापार कार्डहरूको लागि कुन मानक आकारहरू प्रस्ताव गर्नुहुन्छ?
Print Peppermintको पूर्ण-रङ चुम्बकीय व्यापार कार्डहरू तीन आधारभूत आकारहरूमा आउँछन्: मानक, राउन्डर, र अंडाकार। यदि तपाइँ तपाइँको कम्पनीलाई अलग बनाउन चाहनुहुन्छ भने, हामी तपाइँलाई हाम्रो अनुकूलन आकार चुम्बकीय निर्माणकर्ता मार्फत एक प्रकारको कार्ड बनाउन मद्दत गर्न सक्छौं। हामी आश्चर्यजनक वर्ग-आकारको व्यापार कार्डहरू पनि प्रस्ताव गर्दछौं जसले निश्चित रूपमा तपाईंको ब्रान्ड बनाउनेछ ... थप पढ्नुहोस्